Abantu abaningi uxilongwe izifo ezifana esiswini metaplasia emathunjini, esibonakala by ukonakala we epithelium esiswini ku emathunjini. Hydrochloric acid ikhiqizwa amaseli parietal phezani ukwenza umsebenzi walo, kanjalo ukuqala ahlupheke, izitho zokugaya futhi umzimba kuyaphazamiseka.
Isimo somuntu uma kwenzeka leso sifo ubhekwa yingozi, kodwa siyelapheka. Uma esikhundleni amaseli isisu kwenzeka kabusha ikholoni amaseli, kubhekwa isimo precancerous. Nakuba ukwelashwa kulesi simo futhi kungenzeka, kodwa ngezinye izinhlobo eziphambili kukhona Izibikezelo ayempofu kakhulu.
Kuyini metaplasia emathunjini?
Lesi isifo lapho esiswini mucosa kwezicubu esikhundleni amaseli emathunjini. Ngokokuqala ngqá sifo iye yachazwa iminyaka engaphezu kuka-100 edlule uProfesa Kupfer. Lokhu zokugula ngokuvamile kakhulu kuthinta asebekhulile. Ngokwezibalo, 80% eziguli babe kolwelwesi chronic isilonda duodenal.
Ngo abantu abayimiqemane, izicubu limboze izindonga isisu, zonke ibuyekeziwe. Uma umonakalo kwenzeka, amaseli uqale ukwehlukana ngamandla, kuphumele i sithuthukiswe ukufuduka kanye nokuvulwa cell yokuvuselela. Le nqubo in iziguli kolwelwesi ezingamahlalakhona ephazamisekile, ngenxa lapho indlala esiswini wayeka ukwenza imisebenzi yabo, okuholela kwetinhlavu metaplasia.
Metaplasia isisu kuyinto zezinhlobo ezimbili:
wamathumbu ezincane (okuphelele, abavuthiwe);
Colonic (akuphelele, beya).
Ifomu ovuthiwe libhekene khona amaseli ezingasetshenziswa kuphela kube emathunjini amancane: sulfamutsiny, sezinzwa, enterocytes goblet. Nokho, isici esiyinhloko ukuthi uqinisekisa lolu hlobo zokugula ezibhekwa Paneth amaseli. Isisu izicubu uqale wafana emathunjini amancane njengoba isakhiwo futhi izakhiwo sokusebenza.
metaplasia beya isisu libhekene nokuvuthwa kahle kanye nokuthuthukiswa nezindlala esiswini kanye epithelium uvame emelelwa amaseli ikholoni.
You azi ukuthi umdlavuza esiswini e 94% amacala Kutholwe metaplasia akuphelele. isimo esinjalo ubhekwa precancerous, imisiwe ukwelashwa it is ebulalayo.
Ngaphezu kwalokho, kuyafaneleka metaplasia squamous ikakhulukazi. Ake sihlole ke kabanzi.
Kuyini metaplasia squamous?
Isici yalesi zokugula wukuthi kwakhiwa esikhundleni epithelium evamile wakubo ungqimba squamous is. Enkabeni yalo, kuyinqubo wokumelana ka umahluko kakhulu amaseli ovuthiwe kancane ovuthiwe. Lesi sakamuva abe nekhono enkulu ukuba ukuzivumelanisa naso, njengoba ngokuvamile siguqulelwa zezinhlobo kuseli babe ukumelana izici ezihlukahlukene elimazayo.
Ngokwesibonelo, EPITHELIAL metaplasia squamous ka esiswini izilonda esiswini kusiza athambise umphumela olimazayo enzyme ngokweqile acid. Uma ecasulayo isuswe, nezicubu uphindela esimweni saso esivamile.
Nokho, njengophawu lokuthi inqubo sokugembula amaKristu anjalo anomusa metaplasia aninami njalo izici eqine. Lokhu kuholela yokuthi amaseli angavuthiwe, ngokuzama ukulungisa, qala buthelela inani elikhulu zofuzo futhi ingasakwazi ukulawula division yabo, kuphenduke umdlavuza substrate.
Kungani kwenzeka metaplasia?
Lesi sifo eba ngenxa yezizathu ezilandelayo:
ukuvuvukala ulwelwesi esiswini okubangelwa ezahlukahlukene;
ukuvuvukala njalo ijwabu emphinjeni;
ukucasuka yokusetshenziswa pheshana emathunjini;
kolwelwesi, eligeleza isikhathi eside.
ukuthini isifo wasibonakalisa kanjani?
Yisifo ngokwako neze kuzibonakalisa, futhi zonke ejwayelekile izimpawu metaplasia ezihlobene izifo iye yaba negalelo ekuthuthukisweni yayo. Lezi zihlanganisa:
ubuhlungu ngiyaqaqanjelwa esifundeni epigastric.
Ukwandiswa asidi we esiswini kuhambisana Reflux acid, ubuhlungu "elambile", bakwazi ukhule ebusuku. Uma metaplasia emathunjini ephelezelwa ziphonswe emphinjeni lokuqukethwe esiswini, kungase kubonakale ukuhlanza futhi umunyu umlomo.
Ukuhlonza uhlobo lesi sifo, eyenziwa luhlolo histological. Kuyinto ukuthi umzimba womuntu owakheke ngayo zivela izingcezu ezincane izicubu futhi lafundvwako. Indlela kocingo noma amaseli EPITHELIAL ngokuthi biopsy. Le ndlela ukuxilongwe babhekwa edingekayo uma kukhona izinsolo umdlavuza.
Ukuze ubone ukuthi izinga lomonakalo ukuze pheshana emathunjini, ucwaningo olwengeziwe Kwenziwa esebenzisa imishini endoscopic. Izicubu ukusolwa, ingcoliswe ngopende ekhethekile akuyona ingozi ngokuphelele emzimbeni womuntu. Lapho amangqamuzana omzimba zilimele, lokho ukuthola umbala ekhethekile, futhi ngokucacile kungenziwa akubonakali ngesibonakhulu.
Uma sisheshe metaplasia emathunjini, ukwelapha lesi sifo Kwenziwa imithi ngendlela samukelekile. Isiguli kumele ibhaliswe gastroenterologist.
Le ndlela yokwelapha esetshenziswa kulezi zimo ezilandelayo:
ukuqeda gastroesophageal Reflux isifo - isifo libhekene Simoni ehlelekile up emphinjeni okuqukethwe azibukhali esiswini, njengoba umonakalo le mucosa;
ekuvimbeleni izimila ingozi;
ukucindezela uketshezi esiswini.
Ngoba impatho udokotela wakho angase akunikeze imithi ezilandelayo:
Proton ukumpompa inhibitor - ngemithi yanamuhla ukuthi ukunciphisa asidi esiswini. "Omeprazole" sibaphathe, "Rabeprazole" "Pantoprazole".
Antacids ( "Fosfalyugel", "Maalox") - izidakamizwa ekhuthaza neutralization of hydrochloric acid.
H2 - blocker histamine ( "Ranitidine", "cimetidine") - izidakamizwa antisecretory.
Gastroprotectives - uma asidi anda esiswini, zisiza ukuvimbela ukubhujiswa le mucosa.
Uma impatho olandelanayo engalethi yalokho omuhle, ngaleso sikhathi udokotela angase atuse ukuba ukuhlinzwa. iqedwe kanjani metaplasia? Lokhu kwenziwa kusetshenziswa imishini ekhethekile endoscopic ukunciphisa izinga yokulimala, kanti lokhu kubizwa ngokuthi ukuhlinzwa kancane koda. Uma kudingeka, endaweni ezilimele isuswe ngokuphelele. Le ndlela yokwelashwa izikhathi eziningana kunciphisa ingozi zokwakheka umdlavuza.
Ukuze ugweme okuvela izifo ezifana metaplasia emathunjini, kumele uthobele izinyathelo.
Kuyadingeka ukuba ugweme ukubukeka ukucindezeleka, kahle ukubhekana nanoma yisiphi ezishukumisa. Qiniseka ukuthi uphumule ngokugcwele.
Sinamathela ezindinganisweni ezihlanzekile okunomsoco. Esiswini metaplasia emathunjini akuyona kuphela Helicobacter igciwane, kodwa futhi ezinye izifo. Ngaphezu kwalokho, uma kwezinkambiso sanitary eshaywe, ematfuba ukuthola ukudla okunobuthi, ezokwenza eminye obungamcasula mucosa esiswini.
Kufanele unamathele ukudla okunempilo. Kulokhu-ke kuyadingeka ukulishiya ngokuphelele ezifana chemical esikhundleni, njengoba iziphuzo carbonated, okubabayo, elicwengekile, ukudla okunosawoti, inyama. Kungcono afake ekudleni kwakho ukudla, okune-fibre wezokudla. Kungaba ezihlukahlukene wokudla, imifino, amakhambi, izithelo, isinkwa esivela wonke kakolweni.
Ngakho, siye sathola ukuthi metaplasia ezinjalo. Lesi isifo esiyingozi ezingakubangela umdlavuza isisu. Kuphela isikhalazo esifike onguchwepheshe futhi ukugujwa zonke izincomo kudingekile engabambezela noma abaphindela izinqubo elimazayo.
Isisu nobuhlungu bomzimba nangemva kokuphuza: yini okufanele uyenze?
Flaxseed uwoyela: inzuzo kanye nokulimala
Izingane abazali abadla izambane likapondo Russia: amaqiniso yokuphila, amasiko, imfashini kanye ezithakazelisayo